Ingabe iMidokalm neCombilipen bangaqanjwa ndawonye (ukuhambelana kwezidakamizwa) > Ukwelashwa nokuvimbela
Ngingakwazi ukuthatha iMidokalm neCombilipen ngasikhathi sinye?
Zombili lezi zidakamizwa zinohlu olufushane lwe-contraindication nemiphumela emibi.
Kodwa-ke, imali inokwehluka okuningi.
Umuthi usetshenziselwa izifo ezahlukahlukene, ngokwesibonelo, ngezinkinga ngohlelo lwe-musculoskeletal, ukuphazamiseka kwesistimu yezinzwa, ngokuvuvukala, ukuqaqanjelwa. Ukusebenza kweMidokalm kufakazelwe izifundo eziningi zisebenzisa i-placebo.
Umphumela we-Midokalm usengqondweni: kuthunyelwa amasignali ezikhungweni ezifanele ukwehlisa izinga lokuqina kwemisipha. Ngosizo lomuthi, ukuhanjiswa kwezinhlobo ezithile zamasignali ohlelweni lwezinzwa oluvinjelwe kuvinjiwe, umsebenzi wayo we-reflex uyancipha, futhi ukuhamba kwegazi kuthuthukisa endaweni.
Kuneminye imiphumela emihle:
injabulo yethambo lomgogodla liyancipha
ulwelwesi lwensimbi nomuzwa wezinjini uzinzile,
izinqubo zokuvuselela izinzwa ziyehla,
ukuqina nethoni yemisipha kuyancishiswa.
Umuthi uyatholakala ngesimo samathebulethi kanye nama-ampoules omjovo.
ukuthatha amaphilisi kungenzeka uma ingane ineminyaka okungenani engu-1 ubudala kusukela izalwa, ukusetshenziswa kwezixazululo zomjovo uma ingane okungenani ineminyaka emi-5 ubudala izalwa,
ukungabekezelelani kwezakhi zokwakha.
ukungahambi kahle komzimba
ukwanda noma ukuncipha komfutho wegazi.
Ukuvela kwe-overdose akunakwenzeka. Izici zayo zifaka:
ukwephulwa komqondo wokulinganisa nokuvumelanisa kokunyakaza.
Uma i-overdose yenzeka ekhaya, kufanele uthinte udokotela ngokushesha.
Ukwakheka kweCombibipen kufaka izingxenye ezi-3 eziphambili ezinomphumela omuhle ohlelweni lwezinzwa oluphakathi:
I-thiamine: igcina ukuvela okujwayelekile kwezifiso futhi kunikezela nge-glucose kumaseli ezinzwa,
i-pyridoxine: inikezela ngokudluliselwa kwezifiso ngaphakathi kwemicu yezinzwa,
i-cyanocobalamin: inomthelela ekuthuthukisweni kwezinto ezidingekayo kohlelo lwezinzwa oluphakathi.
Umuthi uyatholakala ngesimo samathebulethi kanye nezixazululo ezifakelwayo.
ukuzwela okuphezulu kuzakhi zomuthi,
ukusabela komzimba (ukulunywa, i-urticaria),
ukuthuthukiswa kokuthuthumela kwe-anaphylactic (ukusabela komzimba okungaholela ekufeni),
Imiphumela emibi ingaqedwa ngokwelashwa okubonakalayo.
Ukuhambisana kweMidokalm neCombilipen kuye kwafakazelwa ngokomtholampilo, izakhiwo zabo zokuphulukisa zihambisana.
Izidakamizwa ezilwa nokuvuvukala kanye ne-analgesic nazo zingahambisa ukwelashwa ngokususwa kwama-syndromes ezinhlungu kanye nokuqedwa kokugxila kokuvuvukala.
Izinkomba kanye ne-contraindication zokusebenzisa okuhlangene
Ngaso leso sikhathi, kunconywa iMidokalm neCombilipen ukuze zisetshenziswe ekwelashweni kwezifo ezilandelayo zohlelo lwe-musculoskeletal:
Lezi zifo zingahambisana nokukhubazeka okulandelayo:
ukwephulwa kokuhanjiswa kwezinzwa,
ukungezwani kwemisipha ephezulu endaweni yokulimala kwikholamu yomgogodla.
ICombilipen ingafakwa ngeMidokalm, kepha kuphephile ukwenza lokhu ngomjovo ongaphezu koyedwa.
Awungeke usebenzise inhlanganisela yalezi zidakamizwa uma enye yazo iphulwa.
Ukusetshenziswa kwenkimbinkimbi yemithi kunganikeza izinguquko eziningi ezinhle esimweni sesiguli:
ukuqina kwemisipha kuyancipha
kususa ingcindezi endaweni yenkinga,
ukuhanjiswa kwenzwa kuyabuyiselwa,
izinhlungu nokuvuvukala kuncishisiwe.
Ukuthatha izidakamizwa kungavusa ukubukeka kwemiphumela emibi.
Ukuphazamiseka kwesistimu yokugaya ukudla kuyaphawulwa, kubonakaliswa yisifo sohudo, isicanucanu nokuhlanza, izinhlungu ezi-spastic esiswini.
Kwesinye isikhathi ukusabela komzimba kuba ngendlela yokulunywa, ukuqubuka kwesikhumba, i-hyperemia ne-urticaria.
Mhlawumbe ukwephulwa kwesigqi senhliziyo, ukukhuphuka kwengcindezi yegazi, ukubukeka kwekhanda nobuthakathaka bemisipha.
UMaria, oneminyaka engama-37, uNalchik
Imithi enqunywe udokotela wezinzwa nge-exacerbation ye-osteochondrosis. Wathatha imijovo eyi-7 yeMildronate kanye nemijovo eyi-10 yeCombilipen. Amavithamini ajovwa zonke ezinye izinsuku. Ukwenza ngcono kwaphawulwa ngemuva kwezinsuku ezingama-3-5 zokwelashwa. Ubuhlungu buyekile ukubungabaza, kwaba nokuhamba komgogodla. Ngesikhathi sokulashwa, isicanucanu nesiyezi esincane kwesinye isikhathi kwavela. Kepha-ke konke kwahamba.
U-Irina, oneminyaka engama-54, uMurmansk
Lapho eya kudokotela ngezikhalazo zobuhlungu entanyeni, wancoma amavithamini akwaMidokalm ne-B. Ukwazile ukwelashwa izinsuku ezimbili kuphela, kwavela nezimpawu ezingezinhle. Ikhanda lami laqala ukuzizwa linesiyezi, ingcindezi yaqhuma, yahlanza futhi kwakunzima nokuphefumula. Ngikholelwa ukuthi lokhu kungukubekezelela okuthile kwengxenye ethile. Ukwelashwa bekungalingani nami, kufanele ngikwenqabele.
Kuyinto yokuvuselela izicubu zemisipha eyi-n-anticholinergic. Into esebenzayo i-tolperisone. Inobudlelwano obuphezulu bezicubu zezinzwa. Ivimbela ukuqalwa kwe-nicotine-sensitive cholinergic receptors etholakala ikakhulu kumsipha wethambo, i-autonomic node, naku-adrenal medulla.
Ngaphansi kwethonya lomuthi:
ukwakheka kwe-membrane kuzinzile,
ukwenziwa kwe-motor neurons kanye ne-sensory nerve fibers kuvinjelwe,
ukukhululwa kwama-neurotransmitters kuvinjelwe okwesibili,
I-hypertonicity yemisipha iyaqedwa,
ukuzwela kobuhlungu kuyancipha.
I-Midokalm ayinamphumela wokuyenga, ikhombisa ukuvimba okubuthakathaka kwe-adrenergic kanye nezakhiwo ze-antispasmodic. Kusetshenziselwa ukuqeda ubunzima be-izicubu zemisipha, i-myalgia kanye nezindlela zokuthaka. Izinkomba zokuqokwa:
Imisipha yemisipha ku-myelopathy, i-sclerosis eminingi, unhlangothi, i-encephalomyelitis nezinye izilonda ze-organic zesistimu yezinzwa ephakathi.
Ukunakekelwa kwezimpawu kwe-pathologies yokuvuvukala nokuwohloka kohlelo lwe-musculoskeletal (i-osteochondrosis, i-spondylitis, i-arthrosis, isifo samathambo, i-cervicobrachial neuralgia, i-radicular syndrome).
Ukubuyiselwa kokulimala nokuhlinzwa kwamathambo.
I-musst dystonia ngenxa ye-encephalopathy, kufaka phakathi ifomu le-spastic of cerebral palsy.
Ukwelashwa okuphelele kwe-angiopathy yangaphakathi kanye nokuqothuka kwemithambo ku-atherossteosis, isifo sikashukela, kusabalalisa i-scleroderma, isifo sikaBuger, isifo sikaRaynaud.
Kutholakala ngemijovo yokulawulwa kwe-intravenous and intramuscular (kuhlangene ne-lidocaine) nangesimo amaphilisi ane-coating film ye-50 ne-150 mg.
IMidokalm Richter neCombilipen zinqunyelwe ndawonye ekwelapheni izifo ezinjalo zohlelo lwe-musculoskeletal:
Lama-pathologies ahambisana nezinzwa ezicijile, ukungahambi kahle kwemizwa yezinzwa, ukungezwani kwemisipha ye-pathological endaweni yokulimazeka komgogodla. Imiphumela emibi nayo ingadalwa ukulimala komgogodla.
Ukuhlanganiswa kweMidokalm neCombilipen kukuvumela ukuthi ususe inkimbinkimbi yesibonakaliso kulezi zifo, ngakho-ke impendulo yombuzo wokuthi kungenzeka yini ukugwaza iM Midokalm neCombilipen ngokuqinisekile iyaqinisekisa.
Kule nhlanganisela, iCombilipen ingathathelwa indawo neMilgma, kepha yimuphi umuthi ongcono - ngudokotela okhona kuphela ongaphendula. Akunconyelwe ukuthi uguqule ngokuzimela umuthi kadokotela futhi ukhethe ama-analogues ngaphandle kokubamba iqhaza kwakhe.
Vidal: https://www.vidal.ru/d drug/mydocalm__31619
Yiziphi izifo ezinconyelwe ukusetshenziswa okuhlangene?
UPrick Midokalm noCombilipen ngasikhathi sinye futhi baqasha:
ngokuvuvukala okubangela ukuguquguquka kwekholamu yomgogodla,
ngokuphulwa kwe-cartilage ebonakalayo,
phakathi kokuwohloka kwenhliziyo ethambile yomgogodla womlomo wesibeletho ibe izicubu ezi-ossified,
ukulimala kwemizwa yangaphakathi,
ukwephula imisebenzi yekholamu yomgogodla.
Ukuze ugweme umphumela omubi wezidakamizwa ku-mucosa yamathumbu, izidakamizwa zibekwe ngendlela yemijovo. Le ndlela futhi ikuvumela ukuthi usheshise inqubo yokwelashwa.
Udokotela oholayo ukhombisa ubude besikhathi sokulashwa kwezidakamizwa, kuya ngezimpawu zesiguli: iminyaka, isimo esivamile, isigaba sokuthuthuka kwalesi sifo.
Ngokuyisisekelo, ukwelashwa okuyinkimbinkimbi kuthatha izinsuku ezingama-5. Zombili lezi zidakamizwa zifakwa esitsheni se-venous kanye ngosuku. Okuhlukile uma isiguli sinenqubo yokuvuvukala kakhulu.
Ukusetshenziswa okuhlangene kweMidokalm neCombilipen akubekelwe izizathu ezinjalo:
Uma isiguli simelana ne-lidocaine, etholakala kuzo zombili izidakamizwa.
Ebusweni kwe-hypersensitivity kulo muthi.
Uma kuvezwa ukutholakala kokungezwani komzimba ngamunye: isphyxiation, ukushaqeka kwe-anaphylactic, ukulunywa, ukuqubuka kwesikhumba.
Ebukhweni be-myasthenia gravis - ukukhathala kwemisipha ethambile.
Uma isiguli sinokuntuleka kwenhliziyo noma kwemithambo.
Ukubonakaliswa kokuphazamiseka kwe-hormonal.
Lapho ukhulelwe noma uncelisa ibele.
Lapho kukhona ukwehluleka kwezinso.
Le mishanguzo ayibekelwe izingane ezingaphansi konyaka owodwa ubudala.
Ucwaningo lwezidakamizwa kwabesifazane ngesikhathi sokukhulelwa nokubeletha alwenziwe. Kodwa-ke, ukusetshenziswa okuhlanganisiwe kwezidakamizwa ku-lactation kungabekwa uma umphumela olindelekile oqondile kusuka ekwelashweni udlula amathuba okuba nomphumela ongemuhle.
Ingabe kungaba nezinkinga ngemuva kokusebenzisa?
Njenganoma yikuphi ukwelashwa okuyinkimbinkimbi, ukusetshenziswa okuhlanganisiwe kweMidokalm neCombilipen kungadala ukusabela okungekuhle.
Ngenxa yokungabekezeleleki kwalezi zidakamizwa zombili, imiphumela emibi elandelayo ingenzeka:
Ngomthamo ongalungile we-Midokalm, lokhu kwenzeka kwezinkinga ezilandelayo:
Ubuhlungu besisu esiswini,
ukungakwazi ukuhamba komchamo.
Ngokusho kochwepheshe, le mishanguzo ibekezelelwa kahle, futhi imiphumela emibi ivela ezimweni zodwa.
Izinkomba zokusetshenziswa ngasikhathi sinye
Imithi inikezwa ngasikhathi sinye ukuze kutholakale impumuzo uma:
i-arthrosis yamalunga okuhlangana kwe-intervertebral,
ukwakheka kwe-hernial emgogodleni, kufaka phakathi ama-Schmorl cartilage
dorsalgia, radicular syndromes.
Ngezikhathi ezithile zisetshenziselwa ukulimala komgogodla kanye nangesikhathi se-postoperative.
Ngezifo zohlelo lwe-musculoskeletal
Ukuqeda ukubonakaliswa kwe-osteochondrosis, i-osteoarthrosis, i-intervertebral hernia, imijovo yeKombilipen neM Midokalm isetshenzisiwe. Uma kwenzeka kubuhlungu, kuhlanganiswa nama-painkiller, ahlanganisa nezidakamizwa ezingezona ze-anti -idalidal (i-Meloxicam, i-Ketorol, njll) ngemijovo noma ngamathebulethi. Uhlobo lukhonjelwe ngudokotela.
U-Alexander, oneminyaka engama-41 ubudala, udokotela oyi-neuropathologist, uYalta
Ukusetshenziswa kweCombilipen nge-muscle restant kulungele i-neuralgia. Ngokulawulwa komlomo, amaphilisi we-Midokalm neClodifen Neuro kumaphilisi, aqukethe amavithamini we-B ne-diclofenac, angabekwa.
U-Eugene, oneminyaka engama-45 ubudala, udokotela wezitho zomzimba, eMoscow
Le mishanguzo isebenza ngempumelelo ku-dorsalgia ebangelwa ukuqina kwemisipha kanye nokwephulwa kwezinzwa. Zibekezelelwe kahle futhi zingasetshenziswa enkambweni emfushane.
Yimiphi imisebenzi yesibindi emzimbeni womuntu
I-Unitiol ngotshwala: uhlelo lokusebenza
Imithetho Yokudla Okuphansi Kwe-Carb
Ungasinciphisa kanjani ngokushesha isilinganiselo senhliziyo yakho ekhaya
Ungazibona kanjani izinkinga ze-pancreatic?
Incazelo nezimbangela ezingenzeka zezinguquko ezisebenzayo kumanyikwe
Yiziphi izinguquko ezisebenzayo ku-pancreas Reactive yilezo zinguquko kumanyikwe ezenzeka phambi kokuvuvukala okungapheli kwezinye izitho zesistimu yokugaya ukudla. ...
Blueberry Kushiya Isifo Sikashukela
Uma ushukela ungaphezulu kuka-7 mmol
Isigaba sokubuyiselwa kwemali sithi
IngcindeziIsifo sikashukela ezinganeni nasentsheniIzindabaUkwelashwa nokuvimbelaIsifo sikashukela kubantu besifazaneAma-sweetenersUkuxilongaUkwelashwa okuhlukileIsifo sikashukelaAmamitha kashukela egazi
Uhlu namagama emithi elwa namagciwane angcono kakhulu wepancreatitis, ukubuyekezwa
Imiphumela yokusebenzisa isikhathi eside i-sibutramine
Imithambo ye-Varicose nesifo sikashukela: izimpawu nokwelashwa
Yini ongayenza ukwakhiwa kwekhanda le-pancreatic: izimpawu nokwelashwa
Amakhambi e-Folk ekwelapheni i-pancreatitis